I-RØDE ikhupha i-Studio yePodcast yeMveliso! | Martech Zone
I-RØDE ikhupha i-Studio yePodcast yeMveliso!
NgoLwesibini, nge-11 kaDisemba ngo-2018 NgoLwesibini, nge-11 kaDisemba ngo-2018 Douglas Karr
Inye into andizokwabelana ngayo kule posi yimalini kunye nexesha endikhe ndachitha ukuthenga, ukuvavanya, kunye nokuvavanya izixhobo zeepodcast zam. Ukusuka kumxube opheleleyo kunye nesitudiyo, ukuya kwistudiyo esixineneyo endinokuphatha ngaso ubhaka, ndiye ezantsi kwimakrofoni ze-USB endinokuzirekhoda ngeelaptop okanye nge-iPhone… ndizamile zonke.
Ingxaki ukuza kuthi ga ngoku ibisoloko iyindibaniselwano ye-studio kunye neendwendwe ezikude. Ngumbandela onjalo kangangokuba ndide ndanxibelelana nabanye abavelisi ukuze ndibone ukuba ndingaba nomntu owakha uhlobo oluthile.
Ayisiyongxaki inzima, kodwa ifuna izixhobo ezithile eziguqukayo. Xa uneendwendwe ezininzi ukongeza kundwendwe olukude, ukubambezeleka kwendwendwe okude kuya kubangela isandi selizwi labo kwintloko yabo. Ke, kuya kufuneka wenze ibhasi eshiya ilizwi lendwendwe elikude kwimveliso yokubuyela kubo. Oku kwaziwa ngokuba ngumxube-thabatha.
Kodwa andikwazi ukurhangqa ujikeleze umxube wokucwangciswa kwendlela ukongeza kuzo zonke izixhobo, ndiye ndacinga ukuba ndenza njani ubumbeko olufanayo ndisebenzisa ibhasi ebonakalayo kwiMacBook Pro yam. Kwaye kusekho iintlungu kwi-butt ukuseta.
Ngoku, wonke umntu onephupha lokwenza ii-podcast ezikumgangatho wobungcali uya kuba nakho ukwenza oko ngaphandle komthungo ngeli qonga litsha linamandla. Olu lukhokelo olutsha oluphawulekayo lwe-RØDE: istudiyo sikunye-ngasinye sabapodcasters kuwo onke amanqanaba.
Bendindwendwele umfoti wam wevidiyo namhlanje, u-Ablog Cinema, kwaye ubuza ukuba ndiyayibona entsha I-RØDECaster Pro-Studio yePodcast yeMveliso. Nalu ushwankathelo.
Kodwa linda… kuninzi. Nantsi ingcaciso eneenkcukacha:
Ngaba i-RØDE yayicinga ngayo yonke into? Iimpawu zebhodi zibandakanya:
Iindlela ezi-4 zemakrofoniIklasi A, igalelo elisekwe kwiservo elikwaziyo ukunika amandla imakrofoni yesitudiyo se condenser kunye neefowuni eziqhelekileyo ezinamandla.
Igalelo elahlukileyo le-3.5mm TRRS (ifowuni okanye isixhobo), Bluetooth (ifowuni okanye isixhobo) kunye i-USB (umculo / iaudio okanye usetyenziso lweefowuni)
Ifowuni kunye neefowuni zeapps - ngaphandle kwe-echo (mix-minus). Lungisa amanqanaba ngokulula-akukho giya yongeziweyo okanye ukuseta okungcolileyo okubandakanyekileyo.
Ukucwangciswa kweziphumo zesandiIziphumo zesandi ezi-8 ezinemibala ebangela iijingles ezinokucwangciswa kunye neziphumo zesandi.
Inokucwangciswa kwi-RØDECaster ™ Pro okanye kwikhompyuter yakho ngokusebenzisa isoftware.
I-APHEX® Inomdla ™ Kunye ne-Big Bottom ™Inkqubo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza etyebileyo nefudumeleyo ifumaneka kuphela kwiinkqubo zosasazo lobungcali. Ikwabandakanya i-multistage dynamics: uxinzelelo, ukunciphisa kunye nengxolo.
Isikrini esibanjwayo ivumela ulawulo olulula lazo zonke iisetingi, kubandakanya ukucwangciswa kokulinganisa kuluhlu lweefowuni zobungcali.
Iziphumo ezine zamandla ombane ophezulu kunye nesithethi se stereo ngaphandle, nganye inolawulo lwevolumu elizimeleyo.
Iirekhodi eziya ngqo kwiKhadi le-MicroSD Ukusebenza ngokwakho, okanye kwikhompyuter yakho oyithandayo kunye nesoftware nge-USB.
Ukusasaza bukhoma amandlaUnomathotholo wanamhlanje!
Le nto ayimangalisi! Ukuba namajelo esandi acwangcisiweyo aya kundivumela ukuba ndicwangcise isethulo, ukuphuma, kunye neentengiso kubhabho ukuze ndikwazi ukurekhoda ngokwenyani kwaye ndilayishe ukusingathwa kwam podcast.
Kuthekani ngeVidiyo ebukhoma?
Olunye uncedo lweli yunithi kukukwazi ukuwudibanisa nenkqubo efana nale Isitshizi situdiyo. Iziphumo zestereo zinokuqhuba iaudiyo kwisixhobo sakho esiqhagamshelwe ngoku bukhoma kwaye ungatshintshela ngapha nangapha phakathi kwe-iPads kunye nendwendwe lakho ngefowuni ye-iPhone FaceTime okanye ye-Skype!
Ndinehambo kunyaka ozayo ukurekhoda ngaphezulu Izibane zePodcasts kunye noDell… Kwaye eli candelo liza kuhamba nam. Iyunithi inobunzima obungaphezulu nje kweepawundi ezi-6 ngenxa yoko ayizukubi kakhulu ukuba ijikeleze. Yongeza kwimakrofoni, iintambo, kunye neefowuni kwaye ndingafuna ukufumana into enamavili, kodwa kulungile.
Ukuba bendinesikhalazo esinye ibiya kuba iyunithi ayizukulandela irekhodi elininzi. Ke, ukuba undwendwe lukhohlela ngelixa olunye undwendwe lusathetha… unamathele kulo okanye kufuneka umise umboniso kwaye uphinde urekhodishe icandelo, emva koko tywina amacandelo kunye kwimveliso yeposi. Masibe nethemba lokuba iinguqulelo ezizayo zenza ukurekhodwa kwemikhondo emininzi ngekhadi le-SD kunye neziphumo ze-USB.
Thenga iRØDECaster Pro kwiSweetwater
tags: UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiistudiyo sepodcastobomvuRØDECasteri-USBUsb-c
IiNkonzo zeWebhu zeAmazon: Ngaba inkulu kangakanani i-AWS?